Ahoana ny fomba hanatsarana ny lohateninao ho an'ny SEO (Miaraka amin'ny ohatra)
Fantatrao ve fa ny pejinao dia afaka manana lohateny maro arakaraka ny toerana tianao aseho azy ireo? Marina… ireto misy lohateny efatra samihafa azonao atao amin'ny pejy tokana ao amin'ny rafitra fitantanana atiny.
Lohateny Tag - ilay HTML naseho tao amin'ny valan-javakelinao ary nalahatra ary naseho tamin'ny valin'ny fikarohana.
Lohateny pejy - ny lohateny nomenao ny pejinao ao amin'ny rafitry ny fitantanana atiny hahitanao azy mora foana.
Lohateny pejy - mazàna marika H1 na H2 eo an-tampon'ny pejinao izay ahafahan'ny mpitsidika mahalala izay pejy misy azy ireo.
Lohateny Snippet Rich - ny lohateny tianao haseho rehefa mizara ny pejinao amin'ny tranonkala media sosialy ny olona ary aseho amin'ny topy maso. Raha tsy misy sombin-karena manankarena, matetika ny sehatra sosialy dia alefa amin'ny marika tag.
Matetika aho manatsara ny tsirairay amin'ireny rehefa mamoaka pejy aho. Amin'ny sosialy, mety ho voatery aho. Amin'ny fikarohana, tiako ho azo antoka fa mampiasa teny lakile aho. Amin'ny lohateny, te hanome fanazavana momba ny atiny manaraka aho. Ary anatiny, te-ho mora mahita ny pejiko aho rehefa mikaroka ny rafitra fitantanana atiny. Ho an'ity lahatsoratra ity dia hifantoka amin'ny fanatsarana ny anao izahay mari-pamantarana ho an'ny motera fikarohana.
Tag tags, tsy isalasalana, no singa manan-danja indrindra amin'ny pejy raha tokony hanondro tsara ny atiny ho an'ireo teny fikarohana tadiavinao hahitana anao. Ary ny fitiavana an'izay rehetra izay SEO… Azafady havaozy ny lohatenin'ny pejin-tranonao avy Home. Miondrika aho isaky ny mahita tranokala izay tsy manatsara ny lohatenin'ny pejy fandraisana! Mifaninana amin'ny pejy hafa an-tapitrisany antsoina hoe Home ianao!
Firy ny endri-tsoratra asehon'i Google ho an'ny tag lohateny?
Fantatrao ve fa raha mihoatra ny tarehin-tsoratra 70 azon'ny Google ampiasain'ny Google ny taganao atiny hafa amin'ny pejinao kosa? Ary raha mihoatra ny litera 75 ianao dia mandeha fotsiny i Google tsy miraharaha ny atiny aorian'ny litera 75? Ny tag lohateny efa voafafa tsara dia tokony eo anelanelan'ny 50 sy 70 endri-tsoratra. Matetika aho manatsara ny tarehintsoratra eo anelanelan'ny 50 sy 60 satria ny fikarohana amin'ny finday dia mety hampiala litera vitsivitsy.
Amin'ny faran'ny ambaratonga hafa, hitako fa be ny orinasa manandrana manangona sy manangona fampahalalana tsy ilaina na malalaka be dia be ao aminy tagt tags. Betsaka ny mametraka ny anaran'ny orinasa, ny indostria ary koa ny anaram-pejy. Raha laharana tsara ho an'ny anao ianao teny lakile marika, ny lohateny dia tsy tokony ahitana ny anaran'ny orinasanao.
Misy vitsivitsy maningana, mazava ho azy:
Manana a marika lehibe. Raha izaho no New York Times, ohatra, mety te hampiditra azy aho.
ianao mila fanentanana amin'ny marika ary manana atiny lehibe. Matetika aho manao izany amin'ireo tanora mpanjifa manangana laza ary nanambola vola be tamina votoaty mahafinaritra sasany ry zareo.
Manana anaran'ny orinasa ianao raha ny marina misy teny lakile mifandraika. Martech Zone, ohatra, mety ho mora ampiasaina hatrizay MarTech dia teny matetika tadiavina.
Ohatra: Tag lohatenin-pejy lohateny
Rehefa manatsara ny pejy fandraisana dia matetika ampiasaina ity endrika manaraka ity
teny lakile mamaritra ny vokatrao, serivisinao, na indostria | Anaran'ny orinasa
CMO sombiny, mpanolo-tsaina, mpandahateny, mpanoratra, Podcaster | Douglas Karr
Ampitomboy ny varotra ataonao sy ny Marketing Cloud Investment. Highbridge
Ohatra: Tag lohatenin'ny lohateny pejin'ny jeografika
Ny ampahatelon'ny fikarohana Google finday rehetra dia mifandraika amin'ny toerana arakaraka Blue corona. Rehefa manatsara ny lohateny lohateny ho an'ny pejy jeografika aho dia matetika no ampiasaiko izao endrika manaraka izao:
teny lakile mamaritra ny pejy | toerana misy anao
Serivisy famolavolana sary | Indianapolis, Indiana
Ohatra: Lohatenin'ny pejy lohateny
Rehefa manatsara ny lohateny lohateny ho an'ny pejy lohahevitra aho dia matetika no ampiasaiko izao endrika manaraka izao:
teny lakile mamaritra ny pejy | sokajy na indostria
Fanatsarana ny pejy fitobiana | Serivisy fandoavam-bola isan-tsindry
Fanontaniana miasa tsara amin'ny lohateny Tags
Aza adino fa ireo mpampiasa motera fikarohana dia mirona hanoratra fanontaniana feno antsipirihany ankehitriny ao amin'ny motera fikarohana.
Manodidina ny 40% amin'ireo fangatahana fikarohana amin'ny Internet any Etazonia no misy teny lakile roa.
Maherin'ny 80% amin'ny fikarohana an-tserasera any Etazonia dia teny telo na mihoatra.
Maherin'ny 33% ny fangatahana karoka Google dia teny 4+ lava
Amin'ity lahatsoratra ity dia ho hitanao ny lohateny hoe:
Ahoana ny fomba hanatsarana ny lohateny ho an'ny SEO (miaraka amin'ny ohatra)
Mampiasa ny mpampiasa Iza, inona, nahoana, rahoviana ary amin'ny fomba ahoana amin'ny fangatahan'izy ireo amin'ny fikarohana dia be lavitra noho ny taloha. Ny fananana lohateny fanontaniana izay mifanaraka amin'ny fangatahana fikarohana dia fomba tsara hanarahana index tonga lafatra sy hitondrana ny fivezivezena hikaroka ao amin'ny tranokalanao.
Betsaka ny tranonkala hafa no nanoratra momba ny lohateny sy lohateny SEO ary tsy azoko antoka fa hifaninana amin'izy ireo aho satria manjaka ny teny mifandraika amin'ny SEO ny tranonkalany. Ka nanampy aho misy ohatra manandrana manavaka ny lahatsoratro ary mitondra tsindry bebe kokoa!
Tsy mila saro-kenatra amin'ny fampiasana endri-tsoratra betsaka araka izay tratra ianao. Ny fampiasana teny lakile mifantoka be aloha, arahin'ny teny malalaka kokoa manaraka, dia fomba fanao tsara indrindra.
Fanamafisana ny lohateny lohateny amin'ny WordPress
Raha ao amin'ny WordPress ianao, dia misy fitaovana toa ny Plugin SEO Math Rank mamela anao hanaingo ny lohateninao sy ny anaram-pejinao. Samy hafa ny roa. Miaraka amin'ny tranokala WordPress, ny lohatenin'ny paositra dia matetika ao anatin'ny tag misy lohateny ao anatin'ny vatan'ny lahatsoratra, fa ny lohatenin'ny pejinao kosa dia tag tag izay voasambotry ny milina fikarohana. Raha tsy misy ny WordPress SEO plugin dia mety hitovy ny roa. Laharana Math mamela anao hamaritra ny roa… mba hahafahanao mampiasa lohanteny mandresy lahatra sy lohateny lava ao anatin'ny pejy - kanefa manery ny fehezan-dohatenin'ny pejy hatrany amin'ny halavany mety ihany. Ary afaka mahita topi-maso azy ianao amin'ny isa isa:
60% amin'ny fikarohana Google izao dia vita amin'ny alàlan'ny finday Laharana Math manome koa topy maso finday (bokotra finday ankavanana ambony):
Raha tsy manana plugin ianao ahafahanao manatsara ny sombin-tsarinao amin'ny media sosialy, tagt tags matetika asehon'ny sehatra media sosialy rehefa mizara rohy ianao.
Mamorona lohateny fohy sy manintona izay mitarika tsindry! Mifantoha ny teny lakile amin'ny zavatra inoanao fa hifantohan'ny mpitsidika fa tsy inona intsony. Ary aza adino ny manatsara ny famaritanao ny meta handroahana ny mpampiasa mikarohanao tsindrio.
Pro Soso-kevitra: Rehefa avy mamoaka ny pejinao ianao dia zahao raha mijery ny fomba filaharanao ao anatin'ny herinandro vitsivitsy miaraka amin'ny fitaovana toa anao Semrush. Raha hitanao fa mitana ny laharam-pahamehana amin'ny fitambarana teny fanalahidy hafa ny pejinao… soraty ny tenifototra anao mba hifanaraka akaiky kokoa (raha ilaina, mazava ho azy). Ataoko foana izany amin'ny lahatsoratro ary mijery ny fiakaran'ny tsindry amin'ny Search Console aho!
Fialana andraikitra: Mampiasa ny rohy mpampifandray ahy aho Semrush ary Laharana Math ambony.
Tags: HTMLOptimizationlohatenin'ny pejylaharana matematika seofikarohana OptimizationSEOlohatenytarehin-tsoratra tagteny lakile lohatenyhalavan'ny tag lohatenyfanatsarana ny lohantenysombin-tsarimihetsika manan-karenalohateny hoe seotagt tagsteny amin'ny fangatahana fikarohana
16 Oktobra 2012 à 9:34
Ny tag lohateny no singa meta manan-danja indrindra ary anton-javatra iray. Tranonkala maro no manao fahadisoana amin'ny fandaniam-bola amin'ny fampiasana ny anaran'ny orinasa. Tokony hampiasa teny fanalahidy izy io mba hamaritana izay ao amin'ny pejy.
1 Novambra 2012 à 1:21
lahatsoratra mahafinaritra sy antsipirihany… Amin'ny ho avy dia azo antsoina hoe Baibolin'ny Fanatsarana ny Lohateny izany! Tehaka..
1 Novambra 2012 à 1:38
Mankasitraka indrindra @wiseStep!
May 14, 2013 ao amin'ny 3: 36 PM
Tsy te hanohy ny lohatenin'ny bilaogiko aho aorian'ny lohatenin'ny pejiko fa tsy haiko ny fomba hanaovana izany. Mampiasa plugin All In One Seo Pack aho ary nesoriko ny %blog_title% izay taorian'ny %page_title%, amin'izao fotoana izao dia %page_title%. Mbola mitohy anefa izany. Ao amin'ny kaody lohateny header.php dia, ary ao amin'ny lohatenin'ny page.php dia . Inona no tokony hataoko, mba tsy hitohy ny lohatenin'ny bilaogy aorian'ny lohatenin'ny pejy.
May 14, 2013 ao amin'ny 4: 00 PM
Hanondrana am-pahatsoram-po aho avy amin'ny All In One SEO Pack Plugin ary hametraka ny Yoast SEO Plugin ho an'ny WordPress. Azonao atao ny manafatra ny fanovana any ary izay anananao etsy ambony dia tokony hiasa.